XOG: Gianluigi Donnarumma oo udbihiisa & dhigihiisa sita oo Isniinta la ballansan AC Milan – Gool FM
XOG: Gianluigi Donnarumma oo udbihiisa & dhigihiisa sita oo Isniinta la ballansan AC Milan
Raage June 30, 2017
(Castellammare di Stabia) Juunyo 2017 – Warar soo baxaya maanta ayaa sheegaya in Gianluigi Donnarumma oo ay wehliyaan qoyskiisa iyo wakiilkiisu ay Isniinta la kulmi doonaan AC Milan si looga wada hadlo qandaraaska cusub.
Wiilkan 18-jirka ah ayaa markii hore diidey inuu cusboonaysiiyo qandaraaska uu kula joogo kooxda San Siro oo uu sanad uun ka harsan yahay, balse todobaadkii ugu dambeeyay wuxuu u muuqdau mid is bedeley.
Kaddib koobka Under-21 European Championships oo ay nus-dhamaadka kusoo hareen, wuxuu haatan wiilku qoyskiisa la joogaa tuulada Castellammare di Stabia oo ka tirsan Napoli, Campania.
Sida uu qorayo Gazzetta dello Sport, waxaa la filayay in uu Donnarumma la qadeeyo macallinka Milan ee Vincenzo Montella oo ku sugan Ischia, balse gurigiisa kama soo bixin maalintii oo idil.
Yeelkeede, waxaa jira wada xaajoodyo dhanka telefoonka ah iyadoo lagu wado in ay isaga iyo qoyskiisu u jihaystaan woqooyiga Talyaaniga, halkaas oo ay Isniinta kula kulmi doonaan Mino Raiola iyo maamulka Milan, iyadoo la sheegayo inay qoyskiisu doonayaan inuu sii joogo Rossoneri, balse lama oga waxa uu Raiola la iman doono.
Waxaa kale oo jirta aragti ah in Maamulka Milan ay tagaan guriga qoyska goolwalaha iyo in uu kulanku kasoo hormari karo Isniinta oo uu todobaad-dhamaadka dhici karo waanse idinla socodsiinaynaa i/A.
ADAGAA IBRA!: Ibrahimovic oo kubad-xeebeed ciyaaray & dhakhtar la yaabay!
''Bonucci ugu dambayn wuxuu ku biiri doonaa Blues'' - Paul Mariner